कांग्रेसले गर्दा 'हाइट' बनाएका प्रचण्ड कांग्रेसकै कारण थच्चारिनेछन् : विक्रम पाण्डे | Tapaikokhabar
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : मंसिर १७, २०७४ Big News, समाचार
नेपाली कांग्रेसको साथ पाएका राप्रपाका विक्रम पाण्डेले चितवन ३ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कडा चुनौती दिएका छन् । पाण्डेले प्रचण्डलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै होइन भन्दै चुनौती दिएका हुन् ।
‘प्रचण्डजी आफ्नो ठाउँमा हेभिवेट हुनुहोला,’ बहालवाला मन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले तपाईको खबर डटकमसँग संक्षिप्त टेलिफोन संवादमा भने, ‘तर चितवन ३ मा मेरो अडाडि उहाँ हेभिवेट होइन, त्यसैले मैले उहाँलाई मेरो प्रतिस्पर्धी ठानेको छैन ।’
मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनमा जितेर देशको प्रधानमन्त्री हुने दाबी गर्दैै उनले भने, ‘यहाँका जनताको चाहाना छ, म राप्रपाको अध्यक्षमात्रै होइन, मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, त्यसपछि चितवनमात्र होइन, पूरा देश नै बन्ने छ ।’
चितवनका जनताले प्रचण्डभन्दा आफूलाई कैयौँ गुणा बढी चाहेको उनको दाबी थियो । ‘बाँदरमुढे घटना र स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको रमिता हेरेका जनतालाई सबै कुरा राम्रोसँग थाहा छ ।’ उनले भने ।
प्रचण्डले कांग्रेसको बुई चढेर स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिलेको हैसियत बनाएको भन्दै पाण्डेले भने, ‘कांग्रेसकै बलबुतामा उहाँले भरतपुरमा छोरीलाई मेयर बनाउनुभयो, अब कांग्रेसकै कारण आफू संसदमा जानबाट रोकिनुहुन्छ ।’
एक्लाएक्लै भिड्दा प्रचण्डलाई धेरै मतले हराउने दाबी गर्दै पाण्डेले थपे, उहाँ एमालेको साथ लिएर मैदानमा हुनुहुन्छ, मसँग कांग्रेसको साथ, त्यो भन्दा बढी मतदाताको विश्वास, त्यसैले उहाँ मेरो प्रतिस्पर्धी होइन ।
चितवन ३ मा कसको अवस्था कस्तो छ ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले चितवनलाई यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनताका ‘बहुचर्चित’ बनाइसकेका छन् । अब फेरि उनै प्रचण्ड चितवन ३ बाट निर्वाचन लड्ने भनेपछि माहोल यसै तात्ने भइहाल्यो । छोरीलाई चुनावमा उठाउँदा प्रचण्डले कांग्रेसको साहारा लिएका थिए । यसपटक उनी आफँै उठ्दैछन् । तर यसपटक उनले कांग्रेसको होइन, एमालेको साहारा लिएका छन् । त्यसैले पनि चितवनमा हुने प्रतिष्पर्धा रोचक हुने अड्कल गर्न सकिन्छ ।
विक्रम पाण्डेको प्रभाव पनि चितवनमा राम्रो मानिन्छ । राप्रपा प्रजातान्त्रिकको खास प्रभाव भएको क्षेत्र यही हो । अरु क्षेत्रमा राप्रपाका उम्मेदवारलाई ३ हजार भोट कटाउन पनि मुस्किल पर्ने बताइन्छ ।
चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा भरतपुर महानगरपालिकाको १९ वटा वडा र माडी नगरपालिका पर्छ । माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर रेणु दाहाललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरको नगरप्रमुख बनाएको थियो ।
‘चितवनबाट प्रचण्डलाई चुनाव जित्न कत्तिको सहज छ रु’ अहिले सबैमा कौतुहलताको विषय बनेको छ । मुख्यतयाः भरतपुर महानगरका २९ वडामध्ये अधिकांश वडा ९१९ वडा० चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा परेको छ । यसमा माडी नगरपालिका पनि जोडिएको छ ।
माडी नगरपालिका प्रमुखमा पनि माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवार विजयी भएका थिए । स्थानीय तहको मतपरिणामको आधारमा हेर्दा प्रचण्डले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा माओवादी तेस्रो दलमै सीमित छ । तर उसकोमा एमालेको मत जोड्दा वामगठबन्धन अगाडि छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला माओवादी केन्द्रबाट सबैभन्दा बढी पीडा बेहोरेका एमालेका महानगर प्रमुखका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली दाहाललाई जिताउन चुनावी प्रचार अभियानमा होमिएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगर प्रमुखमा तालमेल भएको भए पनि हरेक पार्टीले वडाध्यक्ष भने एक्लाएक्लै उम्मेदवारी दिएका थिए ।
त्यसैले यहाँ वडाध्यक्षले ल्याएको मतको आधारमा चुनावी विश्लेषण गरिएको छ । उक्त मतपरिणाम अनुसार वाम गठबन्धन ७ हजार ३६५ मतले अगाडि देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरको १९ वडामा नेपाली कांग्रेसले २३ हजार ४८७ मत ल्याएको छ ।
माडी नगरपालिकामा कांग्रेसले ल्याएको ३ हजार ४३६ मत जोड्दा कांग्रेसको मत २६ हजार ९२३ हुन जान्छ । राप्रपालाई माडी नगरपालिकामा कांग्रेसको ल्याएको ८ हजार ३१० मत पनि थपिन्छ । यस अवस्थामा कांग्रेस राप्रपाको संयुक्त मत ३५ हजार २३३ हुन्छ ।
भरतपुर महागरपालिकाको १९ वटा वडामा काग्रेसको मत २३,४८७ छ । माडी नगरपालिकामा कांग्रेसको मत ३,४३६ मत छ । कांग्रेस र राप्रपाको जम्मा मत ३५,२३३ हुन्छ । भरतपुर महानगरको १९ वटा वडामा नेकपा एमालेले २० हजार २५६ मत प्राप्त गरेको छ ।
उसले माडी नगरपालिकामा प्राप्त गरेको मत ४ हजार २३८ हो । यो दुई क्षेत्रको मत जोड्दा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेको मत २४ हजार ५९८ हुन्छ । माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरको १९ वटा वडामा १४ हजार ३३८ मत ल्याएको छ । माडी नगरपालिकामा माओवादीको मत ३ हजार ७६६ हो । यी दुई ठाउँको मत जोड्दा माओवादी केन्द्रको कुल मत १८ हजार १०४ हुन आउँछ ।
भरतपुर महानगरको १९ वटा वडामा एमालेसँग २०,२५६ मत छ । त्यही माओवादी केन्द्रको १४,३३८ मत छ । माडी नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रसँग ३,७६६ मत छ । कुल मिलाएर वाम गठबन्धनको जम्मा मत ४२,५९८ हुन आउँछ । समग्रमा कांग्रेस र राप्रपाको भन्दा वाम गठबन्धनको मत ७, ३६५ बढी देखिन्छ ।
तर स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै व्यक्ति वा पार्टीले पाएको मत प्रतिनिधिसभा पनि आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन । अर्कोतिर विक्रम पाण्डेले गरेका विकासका कामप्रति चितवन २ का मतदाता निकै उत्साहित छन् । त्यसैले पनि पाण्डे प्रचण्डका लागि ठूलै चुनौती मानिएको छ ।
पाण्डेले भनेजस्तो प्रचण्ड उनको प्रतिस्पर्धी नै होइनन् भन्ने तर्क चाहिँ मान्न सकिँदैन । तर, प्रचण्ड र पाण्डेबीच कडा प्रतिष्पर्धा हुने भने निश्चित देखिन्छ ।
यस भन्दा अगाडीसप्तरीका सबै मतदानस्थल संवेदनशील, कस्तो छ सुरक्षा व्यवस्था ?
यस पछिहानिकारक बन्दै कुखुराको मासु
# विक्रम पाण्डे
#कांग्रेसले गर्दा 'हाइट' बनाएका प्रचण्ड कांग्रेसकै कारण थच्चारिनेछन् : विक्रम पाण्डे